Inkcazo yeNcwadi yamaRoma
Ukucacisa isakhiwo kunye neengqungquthela kwiincwadi zikaPawulos kumaKristu aseRoma
Kwiminyaka emininzi, abafundi beBhayibhile kuzo zonke iintlobo zobomi baye bawazisa iNcwadi yamaRoma njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiimbali zehlabathi. Incwadi engenangqiqo ephawulwe ngokuqulathekileyo ngokumalunga negunya leendaba ezilungileyo zokusindiswa kunye nobomi bemihla ngemihla.
Kwaye xa ndithi "upakishwe," ndiyathetha. Nangona abalandeli abanamandla kakhulu kwiincwadi zePawulos ecaweni yaseRoma baya kuvuma ukuba amaRoma ayininzi kwaye idla ngokudideka.
Akuyona ileta ekufuneka ithathwe ngokukhawuleza okanye ikhutshwe isiqwenga ngexesha ngexesha leminyaka.
Ngoko ke, ngaphantsi kwakho uza kufumana umxholo ophawulezayo weengqungquthela ezinkulu ezibhalwe kwiNcwadi yamaRoma. Oku akuhlosiweyo ukuba yiNgxelo yeNkcazo yeeNkcukacha zephepha likaPawulos. Kunoko, kunokuba luncedo ukugcina uluhlu olubanzi njengoko ujonga isahluko ngasinye kunye nevesi kule ncwadi emangalisayo.
Isiqulatho esivela kule nkcazo sincike kakhulu kwincwadi enjalo enomdaka neyincedo I-Cradle, Cross, kunye neConcer: Isingeniso kwiTestamente Entsha - ngu-Andreas J. Köstenberger, uL. Scott Kellum, noCharles L. Quarles.
Ukujonga isakhiwo samaRoma, izahluko 1-8 zibhekiselele ekuchazeni umyalezo weendaba ezilungileyo (1: 1-17), ukuchaza isizathu sokuba sifune ukufumana ivangeli (1: 18-4: 25), kwaye uchaze iintlawulo ezinikezwe ukuvuma ivangeli (5: 1-8: 39).
Emva kwexesha elifutshane ekujonganeni neempembelelo zeendaba ezilungileyo kubantu bakaSirayeli (9: 1-11: 36), uPawulos waphetha incwadi yakhe ngezahluko eziliqela zeemiyalelo ebalulekileyo kunye nokukhuthaza ukuba inyama yenze imiphumo ebalulekileyo yeendaba ezilungileyo zobomi bemihla ngemihla ( 12: 1-15: 13).
Oko kukujonga ngokukhawuleza kwamaRoma. Ngoku ke makhe siqwalasele elowo macandelo ngokucacileyo.
Icandelo 1: Isingeniso (1: 1-17)
I. UPawulos unikeza isishwankathelo esifutshane somyalezo weendaba.
- UYesu Kristu uyigxininiso yeendaba ezilungileyo.
- UPawulos ufanelekile ukuvakalisa iindaba ezilungileyo.
II. UPawulos wayenqwenela ukutyelela ibandla eRoma ngenjongo yokukhuthazana.
III. Iindaba ezilungileyo zityhila amandla kaThixo okusindiswa nobulungisa.
Icandelo 2: Kutheni sifuna iVangeli (1:18 - 4:25)
I. Umxholo: Bonke abantu banesidingo sokulungiswa phambi kukaThixo.
- Ihlabathi lendalo libonakalisa ubukho bukaThixo njengoMdali; Ngoko ke, abantu abanakho isizathu sokumnqula.
- Abeentlanga banesono baze bafumana ingqumbo kaThixo (1: 18-32).
- AmaYuda anesono aze athole ingqumbo kaThixo (2: 1-29).
- Ukusoka nokuthobela uMthetho akukwanele ukukholisa ulaka lukaThixo ngenxa yesono.
II. Umxholo: Ukulungiswa kuyisipho esivela kuThixo.
- Bonke abantu (amaYuda kunye neentlanga) abanamandla okulwa nesono. Akukho mntu ulungisa phambi koThixo ngokusekelwe ekuziphatheni kwabo (3: 1-20).
- Abantu abamele bafumane ukuxolelwa ngenxa yokuba uThixo usinike ukulungiswa njengesipho.
- Sinokufumana kuphela lesi sipho ngokholo (3: 21-31).
- UAbraham wayengumzekelo womntu owafumana ukulunga ngokholo, kungekhona ngemisebenzi yakhe (4: 1-25).
Icandelo 3: Iintsikelelo esizifumana ngeVangeli (5: 1 - 8:39)
I. Ubusiso: Iindaba ezilungileyo zizisa uxolo, ubulungisa kunye novuyo (5: 1-11).
- Ngenxa yokuba senziwe silungisa, sinokuthula noThixo.
- Nangona ngexesha leengxaki zolu bomi, sinokuqiniseka ngokusindiswa kwethu.
II. Iintsikelelo: IVangeli ivumela ukuba sibalekele imiphumo yesono (5: 12-21).
- Isono sangena kwihlabathi ngoAdam kwaye sonakalise bonke abantu.
- Usindiso lwangena kwihlabathi ngoYesu kwaye lunikezelwa kubo bonke abantu.
- UMthetho wanikwa ukutyhila ubukho besono ebomini bethu, kungekhona ukubonelela ukusinda kwisono.
III. Iintsikelelo: IVangeli liyasikhulula ebugqilini besono (6: 1-23).
- Akufanele sibone ubabalo lukaThixo njengesimemo sokuqhubeka nokuziphatha kwethu kwesono.
- Sidibene noYesu ekufeni kwakhe; Ngoko, isono siye sabulawa kuthi.
- Ukuba siqhubeka sinikela kwisono, siya kuba sisigqila kwakhona.
- Sifanele siphila njengabantu abafile kwisono kwaye siphila kwi-Master yethu entsha: uYesu.
IV. Iintsikelelo: IVangeli liyasikhulula ebugqilini boMthetho (7: 1-25).
- UMthetho wawusetyenziselwa ukuchaza isono kwaye ubonakalise ubukho bawo kubomi bethu.
- Asikwazi ukuhlala ngokuthobela uMthetho, kungenxa yoko uMthetho awukwazi ukusisindisa kumandla wesono.
- Ukufa novuko lukaYesu lusisindise ekubeni singakwazi ukufumana usindiso ngokuthobela uMthetho kaThixo.
V. Iintsikelelo: Iindaba ezilungileyo zisinika ubomi obulungileyo ngoMoya (8: 1-17).
- Amandla kaMoya oyiNgcwele asinika ithuba lokuphumelela kwisono ebomini bethu.
- Abo baphila ngamandla kaMoya kaThixo banokuthiwa ngabantwana bakaThixo ngokufanelekileyo.
VI. Iintsikelelo: Iindaba ezilungileyo zisinikela ngokusisigxina kwisono nokufa (8: 18-39).
- Kulo bomi sifuna ukulangazelela ukunqoba kwethu kokugqibela ezulwini.
- UThixo uya kugqibezela oko aqalisile ebomini bethu ngamandla kaMoya wakhe.
- Thina siwunqobe ngaphezu kwexesha elingenammiselo kuba akukho nto ingasahlukanisa nothando lukaThixo.
Icandelo 4: IVangeli namaSirayeli (9: 1 - 11:36)
I. Inhloko: Ibandla lihlala liyinxalenye yesicwangciso sikaThixo.
- U-Israyeli wayemgatyile uYesu, uMesiya (9: 1-5).
- Ukugatywa kukaSirayeli akuthethi ukuba uThixo waphula izithembiso zakhe kumaSirayeli.
- UThixo uhlala ekhululekile ukukhetha abantu ngokwecebo lakhe (9: 6-29).
- Ibandla liye laba yinxalenye yabantu bakaThixo ngokufuna ukulunga ngokukholwa.
II. Umxholo: Abantu abaninzi baye balahleka iphuzu ngokuphathelele uMthetho kaThixo.
- Nangona iintlanga ziphishekela ubulungisa ngokukholwa, amaSirayeli ayengamathembela kwingcamango yokufumana ubulungisa ngomsebenzi wabo.
- Umthetho usoloko uphawula kuYesu, uKristu, kunye nokuzilungisa.
- UPawulos wanikela ngemizekelo emininzi kwiTestamente Endala ekhomba kwiindaba ezilungileyo zensindiso ngobabalo ngokholo kuYesu (10: 5-21).
III. UThixo usenamalungiselelo kumaSirayeli, abantu bakhe.
- UThixo wakhetha intsalela yamaSirayeli ukuba athole usindiso ngoKristu (11: 1-10).
- Iintlanga (icawa) akufanele ikhukhume; UThixo uza kuphinda aphendule amaSirayeli (11: 11-32).
- UThixo uyisilumko kwaye unamandla okwaneleyo ukusindisa bonke abamfunayo.
Icandelo 5: Impembelelo eSebenza yeVangeli (12: 1 - 15:13)
I. Inhloko: Iindaba ezilungileyo ziphumela ekuguquleleni ngokomoya kubantu bakaThixo.
- Siphendula kwisipho sosindiso ngokuzinikela kunqulo kuThixo (12: 1-2).
- Iindaba ezilungileyo zitshintsha indlela esiphatha ngayo (12: 3-21).
- Iindaba ezilungileyo zichaphazela nendlela esabela ngayo kumagunya, kuquka urhulumente (13: 1-7).
- Simele siphendule kwenguqu yethu ngokwenza oko uThixo afuna siyenze, kuba ixesha lisondele (13: 8-14).
II. Umxholo: Iindaba ezilungileyo zibaluleke kakhulu kubalandeli bakaYesu.
- AmaKristu akayi kuvumelana nanjengokuba sizama ukulandela uKristu kunye.
AmaKristu angamaYuda kunye namazwe angamaYuda kwimihla kaPawulos ayengavumelani nenyama edlalwa ezizithixo nokulandela iintsuku ezingcwele ezivela kuMthetho (14: 1-9).
- Umyalezo weendaba ezilungileyo ubaluleke ngaphezu kokungahambisani kwethu.
- Wonke amaKristu kufuneka alwele ubunye ukuze azukise uThixo (14:10 - 15:13).
Icandelo 6: Isiphelo (15:14 - 16:27)
I. UPawulos ucacise izicwangciso zakhe zokuhamba, kuquka ukutyelelwa eRoma (15: 14-33).
II. UPawulos waphetha ngokubulisa abantu kunye namaqela ahlukahlukeneyo ebandleni laseRoma (16: 1-27).
UYona 3: Isahluko seSahluko seBhayibhile
Iimfundiso zobuxoki zeTestamente elidala
Ivesi zeBhayibhile kwixesha elizayo
Yintoni uMthendeleko weeCilongo?
URichard III Izihloko: Amandla
Iimpawu ze-Johnny Cash Albums
IsiKhokelo seNkxaso yeSikolo soBucala
Gemini noLeo Uthando olufanelekileyo
UMTHETHO ISayensi Ukuqiqa ulwazi